रुपन्देहीमा कोरोना निको पार्ने आयूर्वेद औषधी बन्यो, १सय ३८ संक्रमित निको भएको दावी – Swasthya Samachar
रुपन्देहीमा कोरोना निको पार्ने आयूर्वेद औषधी बन्यो, १सय ३८ संक्रमित निको भएको दावी
प्रदेश ५ सामाजीक बिकास मन्त्री बरालद्धारा अध्ययन गर्न बिज्ञ टोली गठन
August 31, 2020 August 31, 2020 Editor स्वास्थ्यसमाचार
स्वास्थ्यसमाचार /भैरहवाका आयुर्वेदाचार्य डा. बद्री गौतमले आफूले तयार पारेको जडीबुटी औषधिबाट कोरोना भाइरस संक्रमणका बिरामी निको भएको बताएका छन् ।
डा. गौतमका अनुसार बाँकी १८ जना बिरामीले पनि औषधि सेवन गरिरहेका छन् । नेपालमा पाइने ५ प्रकारका जडीबुटी र स्वर्ण घटक द्रव्य मिश्रण गरी आयुर्वेदिक औषधिको गोली तयार पारेका उनको भनाइ छ ।
चीनको वुहान प्रान्तमा कोरोना भाइरसका कारण मानिसको मृत्यु भएको खबर सुन्नसाथ जडिबुटीबाट औषधि बनाउन आफूले अध्ययन थालेको उनले बताए ।
पछि उनले पाएको जानकारीअनुसार अस्पतालका चिकित्सकहरू अप्रमाणित औषधि बिरामीलाई दिन तयार भएनन् ।डा. गौतम जडिबुटी सहकारी लिमिटेड अन्तर्गत काम गर्छन् । जडीबुटीबाटै देश समृद्ध बनाउनुपर्छ उनको अभियान छ ।उनी २०६८ सालदेखि ‘त्रयम्बकम्य जडिबुटी सहकारी’ मार्फत अनेक प्रजातिका जडिबुटीको प्रवद्र्धन, संरक्षण र अनुसन्धानमा छन् ।
रुपन्देहीमा समुदाय स्तरमा कोरोना संक्रमण फैलिएपछि एकाएक ‘अर्कबटी’ को माग बढेको छ । भैरहवाको युनिभर्सल मेडिकल कलेजमामा कार्यरत एक जना संक्रमित स्वास्थ्यकर्मीले अर्कबटी सेवनपछि श्वासप्रश्वासमा आफूलाई सुधार भएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘मलाई संक्रमण थियो, मेरो श्रीमानको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भयो तर रिपोर्ट नआउँदै आत्तिएर अर्कबटी खानुभयो, अहिले सुधार भएको छ ।
’यी स्वास्थ्यकर्मीको उमेर ५२ वर्ष र उनका श्रीमानको उमेर ६५ वर्ष छ । बुटबलका पत्रकार डिआर घिमिरेले पनि बुटबलको नयाँ गाउँमा १० जना संक्रमित अर्कबटी सेवन गरेर निको भएको बताए । बुटबल उपमहानगरका एक कर्मचारी र उनकी श्रीमतीले पनि अर्कबटी सेवन गरेको र संक्रमणमुक्त भएको घिमिरेले बताए ।
संघीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले आयुर्वेदिक औषधि अर्कबटीबारे जानकारी पाएर शुभकामना दिएको डा. गौतमले बताए । वागमती प्रदेशका मन्त्री अरुण नेपालले अनुसन्धानका लागि प्रयोगशाला आवश्यक भए सहयोग गर्ने आश्वासन दिएको पनि डा. गौतमले बताए ।
डा. गौतमले प्रदेश ५ का सामाजीक बिकास मन्त्री सुदर्शन बरालले फोन गरेर औषधी बारे अध्यन गर्न प्रदेश सरकारले टोली बनाएर पठाएको बताए । मन्त्री बरालले टोलीले अध्यन गरेपछि प्रदेश सरकारले आफनो धारण बनाएर औषधीको बारे छलफल गरेर अघि बढने बताए । तर प्रदेश ५का आयुर्वेदका चिकित्सकले उल्टै आयुर्वेद चिकित्सकले भ्रम फैलाएको वताए ।